Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Xukuumadda Uu Soo Dhisaayo | RBC Radio	Home
Friday, October 19th, 2012 at 04:55 am	/ 4 Comments Maxaa shacabka Soomaaliya ka filaya xukuumada cusub. W/Q Abdulkadir Mohamoud Walayo
Monday, October 8th, 2012 at 12:26 am	/ 90 Comments Thursday, October 11th, 2012 at 06:52 pm Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Xukuumadda Uu Soo Dhisaayo
Muqdisho (RBC Radio) Ra’iisal Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) ayaa ballan qaaday in uu soo dhisi doono xukuumad tayo leh oo ka shaqeysa horumarka dalka.
Mr. Saacid ayaa wareesigiisii ugu horreyay waxa uu siiyay VOA-da qeybta Soomaaliya tan iyo markii loo magacaabay xilkaas toddobaadkan.
Wuxuu sheegay in xukuumada uu soo dhisi doono ay ku shaqeyn doonta qorshaha lixda tiir ee uu sameeyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, taasoo uu ballan qaaday in lagu dhisi doono hey’addaha dowladda.
Madaxweynaha ayaa horrey u sheegay in uu mudnaanta siin doono, yagleelida xasilooni, dib u soo kabasho dhaqaale, dhisida nabadda, gaarsiinta adeegyada bulshadda, mideenta qaranka iyo horrumarinta xiriirka caalamiga.
Ra’iisal wasaaraha ayaa sheegay in uu furi doono qaab lagu shaqeeyp, haddii suuragal noqon doono, wuxuu kaloo sheegay inuu soo dhisi doono xukuumad kooban oo tayo leh, laguna kalsoonaan karo.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u doortay Saacid Ra’iisal wasaare Sabtidii, waa nin ku cusub siyaasadda, laakin waa ganacsade saldhigiisu ahaa Kenya, ka hor inta uusan noqon ra’iisal wasaare.
Xaaskiisa waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya.
Bishii la soo dhaafay, ayaa Soomaaliya waxa ay ka baxday xilligii ku-meel-gaarka ah, oo ay ku jirtay 21-kii sano ee la soo dhaafay, waxana hadda loo dhisay dowlad dhexe oo dalka uu yeesho.
Tags: Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Xukuumadda Uu Soo Dhisaayo	9 Responses for “Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya Oo Ka Hadlay Xukuumadda Uu Soo Dhisaayo”
Omar says:	October 11, 2012 at 8:17 pm	I’m carefully watching what role will lawyer Abdirahman Hosh Jibril be allowed to play in the new government of Mr. Shirdon, perhaps the new minister of justice or maybe our nation’s Chief Justice. I’m also watching the fingerprints of madam ASha Haji’s HAG organization on our new cabinet ministers, and how this HAG philosophy affects the process that going on to establish Jubaland Region Adminitration Authority. I have never accused our former president Shariif of being member of HAG, but I very concern with our new leaders’ close relationship with HAG (Hawiye Action Group) an organs ion that is believed to have committed serious human rights violations in the past .
Nuur Galaadi says:	October 11, 2012 at 9:05 pm	Waa Larki dona.Ra.isawaraha wuxu qabto mid khayr qaba ahaha noga dhigo
Abdi wali says:	October 11, 2012 at 9:19 pm	Wakiilkena sacid waxa sugeso howshii aan udooranay hada nahy reer muqdisho taaso ahyd carqaladenta arimaha kismanyo dhabar jabinta puntland taasoo loo marayo kahortaga fadaralismka mr saacid dhagahada fur amarka kooxda damul jadiid unuglaw iyo waliba golaha guurtida hadaad ka dhaga adeegtid awamirta odayasha dhaqankena iyo rabitanka mr xaad iyo axmed diriye iyo damul jadiid adeer waxa mari doontaa wadadii ay mareen ilmo aderda oo kala ahaa cabdulahi yusuf axmed cumarcabdi rashid farmaajo iyo cabdi wali gaas dhagahada ufur danaha odayasha dhaqanka beelaha muqdisho hadii kale barqo ayad ciil iyo ceeb kala tagesa muqdisho
moo says:	October 11, 2012 at 9:36 pm	soo dhawoow mudane. waxaan kaa sugnaaba waa waxqabad daacad ah iyo hormar.
Puntlander says:	October 12, 2012 at 1:04 am	Mudane Raysal Wasaare kheyr Allaha ku siiyo waxaan kaa sugaynaa in aad naga saarto kana hortimaadid fikirka Amxaaradu keentay ee ah Federalka si naloo qeyb qeybiyo kadibna Qaybana la goosto Qaybana la xukumo oo la dulleysto. Dadbaa Federal, Federal ku waashay waana hal koox oo qabiil ku saleysan, marka waa in Deegaanada dib u habeyn lagu sameeyaa kadibna Federaalka Afti dadweyne loo qaadaa. Sida hada Deegaannada qaarkood yihiin oo aysan isugu dheelli tirnayn waa in wax laga badalaa marka hore inta aanan Tillaabo la qaadin.
Waxaan ahay dadka laga badanyahay ee Puntlad kunool oo leh laguna dulmo maalin kasta oo xaqooda meel looga dhaco. Hadii sida ay xaaladu tahay Federal nalookugu sii daro, hade Waxaa loo daneeyay qabaaillada waaweyn oo had iyo goor dulmi ku haya qabaaillada yaryar ee ay wada dagaan. Sidoo kale Mudane Raysal Wasaare waxaan codsanaynaa in aadan ka labo labeyn hamigaaga iyo barnaamijkaaga ah in Puntland lagu sameeyo Reform ama Restructuring dhinaca Dhulka ah si la isugu dheelli tiro saameynta ay qabaaillada dhulkaas wada dega isku yeelanayaan loogana hortago in qabaaillada waaweyn ay ku tuntaan xuquuqda kuwa yaryar. Sida dhabta ah qabaaillada Puntland degan ee looga tiro badanyahay farac ahaan loogama tiro badna ee waxay qabiilladaasi ku kala baahsanyihiin degaan ahaan Soomaaliya oo dhan, Koonfurtaba ha u badnaatee.
SIDAAN IN LA SAMEEYAA ILA HABOON MUDANE
Mudane Raysal Wasaare,Si Qabaaillada Puntland dagan ay isugu dheelli tirmaan, sidaan ha la yeelo;
1, Ha lala tashado qabaaillada muhiimka ah ee Puntland looga badanyahay ee aan ku qanacsaney sida hada ay wax yihiin. Runtii iyagaa mudo waday inay Socially iyo Geographically-ba Reform ku sameeyaan Puntlandta maanta oo siyaasadii iyo dhaqaalihiiba hal qabiil isku koobmay.
2, Gobolka Nugaal ha lagu daro Khaatumo State. Sidaas daraadeed, Sool, Sanaag, iyo Nugaal kaliya ha Noqdeen Khaatumo State. Dhulka Khaatumo oo aan reebay waxaan ugu talo galay (Marka Sanaag laga reebo) in ay halkaas Iyaga iyo Awdal State la isku laro si ay awoodoodu u le’ekaato gobolkii Somaliland la Oran jiray waqtigii kumeel gaarka hadase sidiisii hore ee wakhtigii Maxamed Siyaad Barre (AUN) ku soo noqday maadaama Barisamaadkii hada dib loogu noqday oo aan kumeel gaar iyo ciyaar ciyaar ka baxnay.
3, Labada Gobol ee Bari iyo Sanaagna ha la isku daro si Boqortooyadii Cali Shire bal mar kale usoo bidhaanto taasoo runtii aheyd mid dalkeenna qaybtaas Bari iyadu waligeed ka kobcin jirtay Dhinaca Ammaanka iyo Dhaqaalaha hadase markii rageedii cid kale ku aamineen Goboladaasu noqdeen meel Amxaaradu hilibka Cayriin ku cunto Biirtana ku dhanto.
4, Labada Gobol ee kala ah Mudug iyo Galgaduudna ha la isku daro. ( Galdogob, C/Waaq, Cadaado, iyo Baraxleyna Hobyo ha ka sameysteen Deked hana ku heshiiyeen illeen ma kala adkee). Haday reer Baraxley Hobyo sheegtaanna don’t worry, sheeko baraleeydii Cali Yuusuf baa Hobyo ka talin jiray aheyd baa la ciyaarayaa intaasina Dood ugu filan labada ciidan ee Gaas-Dhagoole iyo Birqalax. Mudane Raysal Wasaare Markaad sidaas yeesho kadib Federalka afti dadweyne u qaad si aan u aragno cida Diida iyo cidda yeesha.
mohammed ali says:	October 12, 2012 at 3:32 am	inkastoo muuqdiso dowlad aan looga baahnany, hadana dagdaga looma baahna halaga war sugo reer muuqdisho iyo waxay rabaan. midakale xisbiga sahal ma’aaminsa federaal waa been haduu yiraahdo fedaraal baanu kushaqaynaynaa, qodobada uu kasheegay idaacada ugumajiro wax layiraahdo dhisida dowlad federaal.
Mr hussein says:	October 12, 2012 at 5:34 am	Ani waxan ugu baqaya ama an ushegaya mr saacid inu mel iskadhigo waxa ladhaho land land mxa yelay land land hadi an ubahanahay ina lashaqeno ama hostagno waxan doranlahen majerten marka taa bedelked kashaqe waxa lugu dortay ogowna dadka ubahay shaqadada e dhakhso e hurumar ken
runta says:	October 12, 2012 at 7:28 am	@puntlander waad iga qoslisay walaahi qoraalkaagu wuxuu mudan yahay in kor lagu soo daabaco kkkkkk toloq qaybta xaggee kusoo baratay?!!
Buuhoodle says:	October 18, 2012 at 1:36 pm	Sareeye madaxweyne ayaa ku baaqey beelaha laga taribadanyahey reer puntlad in ey kusoo biiraan xisbiga damjadiid kooxdani ama dhiige cusub sheeko nugu cusub kk
UNHCR : Tirada Qoxootiga Soomaalida Ee Ku Nool Dalka Ethiopia Way Korartay
Madaxweynaha Puntland Oo Dib Ugu Soo Laabtay Garoowe
Daawo Sawirro: C/Wali Gaas oo Gaalkacyo Si Weyn Loogu Soo Dhaweeyey
Kolonyo Amisom Ka Tirsan oo Lagu Qarxiyey Agagaarka Degmada Wanlaweyn
DEG DEG: C/weli Gaas Iyo Xubno La Socda oo Ka Degey Magaalada Gaalkacyo
Duqeyn Ka Dhacday Duleedka Dhoobley
Faah-faahin: Ciidamadda Badda Puntland oo soo Bandhigay Hubka Lidka Gawaarida Gaashaaman iyo Walxo Qarxa [Sawirro]
Taliska Ciidamada Dowlada Oo Sheegay Howlgalka Gobalka Shabeelaha Hoose Inuu Umarayo Meel Wanaagsan
Munaasabad Lagu Soo Dhaweeynayay R/wasaare Saacid laguna sagootinayay R/wasaarihii Hore Oo Lagu Qabtay Madaxtooyada (Sawirro)
Shir Looga Hadlaayo Maamul U Sameenta Gobalada Jubbooyinka Oo Ka Dhacay Muqdisho
Pakistan offers Somalia support to face post-transition challenges
SOMALIA: Journalists protest against an article published by the Guardian Newspaper
SOMALIA: New PM takes office, new cabinet to be formed soon
SOMALIA: Armed men assassinate district administrative official in Mogadishu